Indlela uxolise intombazane? Kunengqondo lula - wathi "sorry" futhi zilungele. Kodwa lapho, kwase kulula. Ngokwemvelo yabo, abesifazane libukhali kakhulu kunamadoda uhlangabezana ngisho ukuphoxeka kancane, intukuthelo futhi nezinye izinto ezingebona ubulungisa ayethule. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthuthukisa lonke isu ukuba amathuba amaningi intethelelo entombazaneni.
Kodwa okokuqala, ake siqonde ukuthi kungani le ntombazane bebengaba intethelelo. Ezimweni eziningi, lokhu kuyinto kakhulu ubuhlungu ukuziphatha yakho (inattention noma kuyicala ngaphezulu). Yena kudlula e ukuxabana lakho kaningi, uzizwa ngesikhathi esifanayo ewufanele nokwelashwa okungcono. Enye intethelelo kwesithiyo kungenzeka nokulwela nokuziqhenya (nokuziqhenya ngaphezulu), kanye umbono nezintombi noma omama.
Kodwa kunento eyodwa ngempela - akukho Esimweni esinjalo, uma bekungenjalo ngokuphelele kungenzeki ukuba axolise intombazane. Zonke lithembela ngokuphelele isifiso sakho, ukuzinikela kanye, yebo, ulwazi oluhle lo Psychology abesifazane. Futhi uma kuqala izimfanelo ezimbili - siqu sakho, okuthile zokugcina nafika ikheli esifanele. Ngezansi, sinikeza izincomo ukuthi uzokusiza sifinyelele imiphumela.
Indlela uxolise intombazane: cwilisa misa isikhashana
Phakathi naleso sikhathi, uye wenze icala futhi ukuxolisa kwakho kufanele nakanjani kuthathe isikhathi esithile. Okokuqala, imizwa intombazane poutihnut phakathi nalesi sikhathi, futhi kuyomelwe amathuba ngaphezulu ukuze uthole ushwele. Okwesibili, uma une izinsuku ezimbalwa ngeke "okufakiwe befuna izimpawu zokuphila," ubuhle kabi ngeke ucabange ukuthi wena uyazi wecala, ubhekisisa ukuziphatha kwakhe okungalungile. Kuyinto kunoma isiphi isimo bazobe sebecela. Okwesithathu, uma "isikhathi" izobanjezelwa, intombazane kuyodingeka ukuhlupha ukungabaza - mhlawumbe yena unecala e iyalwa futhi ukuthi wena ngempela kuyo "amagalelo". kungenzeka ukuthi unesizungu futhi ngeke anikele ukwenza ukuthula ekugcineni-umbukwane.
Indlela uxolise intombazane: ingxoxo Tete-a-Tete
Lapho ucabangela oyifunayo misa isikhashana okuqhubekayo, ningabizi noma ukubhala sms intombi ekucela ukuba uthethelele - kuyinto evamile, yesimanje kanye lena abavamile kakhulu. Lokhu ngeke kumhlabe umxhwele. Into engcono kungaba ukuza intombazane mathupha. In an icala ngokwedlulele, ukumbhalela le ncwadi (ephepheni) bese uthumela yizithunywa.
Ngesikhathi esifanayo, naye ngokubhala noma mathupha ake intombazane iyazi ukuthi yona - ekhethekile, eliyingqayizivele futhi kakhulu kuwe. Yena kumelwe akholelwe ukubona, ukuqonda, sengathi ngabe akukho muntu ukukwenza kangcono kunawe. Yisho ngobuqotho, okuyizinto nje abazokwazi zonke izinto ezinhle ocabanga ngayo, futhi musa ukugxila imininingwane agumenti. Ngemva komshuduliswano ngezibhakela zakhe musa ngiyontengantenga, ngakho uma beza sithethelelwe, akudingekile ukuba sikhumbule waphinda isimo, ngenxa obekukhona kuwo ukungaqondi (ngisho noma ngabe iphutha abesifazane). Uma usunqume ukuxolisa ke, a priori bayavuma babekhuluma iphutha.
Cela ukuthethelelwa ukuza kangcono, mhlawumbe ngokumangalisayo, elambatha. Izimbali, uswidi nezipho - konke lokhu Yiqiniso, kuhle futhi kuyadingeka e ubuhlobo nentombazane. Kodwa ngisho noma wonke lokhu kuzokwenzeka, lapho wenza ukuthula. Iqiniso lokuthi ezinye ubulili fair abangase basibheke izipho zakho ngokusuka enhliziyweni njengoba ngomzamo ukuthenga ukulitjalelwa. Futhi bayakwenza ngeke kuzwakale kahle kakhulu.
Indlela uxolise intombazane: ukutshela umhlaba ngemizwa yakho
Uma usalokhu akathetheleli nawe okwamanje, zama ukubamangaza wakhe nge emcabangweni wakhe, ukuhlakanipha kanye namakghono. Ungayeki at okucashunwe elula phezu kwendawo egandaywe ngamatshe ngaphansi amafasitela wakhe, oda isisebenzeli sokukhangisa nge omkhulu poster inhliziyo yabo ukuxolisa, okuzokwenza ke kudingeka ngiyibeke eduze kwesango. Noma oda ukulethwa lenqwaba anomoya ehhovisi lapho ngisebenza ozithandayo yami, noma isikhungo, lapho ngifundela ukuba ofakazi izaba yakho zonke nawozakwabo, abaziphethe. Ezimweni ezinjengalezi kumane nje esingesihle ayoziveza umuntu abandayo ngokuphelele futhi uyaziqhenya. Ungakwazi ukuxoxa abaculi bese wenza misindo, isibonelo, iSpanishi. Uzitholele isithombe sakho ngokuhlanganyela. Kubo ungenza ikholaji enkulu uwubeke umsebenzi walo, e emnyango noma esikhungweni semfundo. Futhi ungabhala ngisho amashidi ehlukile incwadi "P", "R", "O", "C", "T", "Mina" futhi unike abedlula ngendlela echaza kubo phambi ukuthi ngokuyisisekelo a ezifana Perfomance amancane, kodwa ibaluleke kakhulu kuwe .
Ubunzima uthando kuqala
Party isitayela Retro
Indlela ukuphakamisa ukuhlangabezana umfana - uma kufanele athathe isinyathelo kuqala?
Umbhali izifundo kanye trainings Igor Merlin: ukubuyekezwa, biography, isheduli netimphawu izinhlelo
Amadoda Pugacheva: uhlu (izithombe)
Military Space Academy okuthiwa A. F. Mozhayskogo. Mozhayskaya Academy Petersburg
Job Description umakhenikha izimoto. Job Description Chief motor umakhenikha
Kanjani ukuqala ukunciphisa umzimba owesifazane? Kanjani ukuqala ukunciphisa umzimba womuntu?
A elula izinwele imaskhi amaqanda noju